Ciidamada Xooga dalka oo kooxda Ahlu Sunna kala wareegay Baraha lacagaha looga qaado Gaadiidka ee. – Kismaayo24 News Agency
by admin 21st February 2020 0127
Ciidamada Militariga dowladda ayaa la wareegay baraha lacagaha lagu qaado ee magaalada Dhuusmareeb sida ay sheegayaan warar laga helayo caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Ilo wareedyo lagu kalsosonaan karo ayaa shaaca ka qaaday in Ciidamada Militariga ay gabi ahaan la wareegeen barahii ay ciidamada taabacsan Maamulka Ahlu Sunna lacagaha ku qaadi jireen ee ku yaalla xarunta Galmudug.
Ciidamadii halkaas lacagaha ku qaadi jiray ayaa isaga baxay goobaha ka hor inta aysan ciidamada Militariga imaan, waxaana la fahamsan yahay in goobahaas ay lacago uga soo xaroon jireen maamulka Ahlu Sunna.
Golaha Wasiirada Galmudug ayaa go’aamiyay la wareegista ilaha dhaqaalaha kulankoodii isbuucaan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor oo shalay shir gudoomiyay kulankii golaha wasiirada, waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda maamulka ee 2020, taasoo lagu sheegay 17,230,054.00 (Todobo iyo toban milyan, laba boqol iyo soddan kun, iyo konton iyo afar doolar).
Miisaaniyaddaan ay meerl mariyeen golaha wasiirada Galmudug waxa ay labo-laab ka badan tahay miisaaniyadii 2018 oo aheyd kaliya $8,000,000 (Sideed Malyan oo Dollar).
DHAGAYSO:Somaliland oo xaaladii ugu darnayd maraysa & Shir lagu baaqay
Akhriso: Guddiga Baaritaanka ku Sameynaayay Dilkii Cadaado loogu geestay Mid kamid ah Ergada oo soo Bandhigay Muuqal iyo Warqad Cadeyn ah
XOG: Maxaad kala Socotaa Meydadka Askar Badan oo Itoobiyaan ah oo Manta la geeyay Magaalada Beledweyne
Dhageyso: Koonfur Galbeed” Xaasaska ay qabaan Alshabaab oo lagu Amray in ay is diiwaan galiyan toloow Xagee loo wadaa Akhri….